Wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD oo shiraya arrimaha Soomaaliya iyo dowladda talyaaniga oo wakiil u soo dirtay shirkaasi iyo Prof. Geeddi oo xiray in ay dowladda ku ammartay in ay dadka ka qaxaan xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho. Ruunkinet 13/04/07
Kulan ayaa uga socada magaalada Nayroobi wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku bohoohay IGAD.
Shirkan oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ku kala qeybsan yihiin wasiirada arrimaha dibadda ee fadhigaasi ka qeyb galaya.
Mas'uuliyiintan ayaa la sheegay in ay ka hadlayaan sidii ciidamada midowga Afrika ee lagu heshiiyay in la geeyo Soomaaliya loogu soo dhaqsan lahaa iyo dhibaatada haysata shabcabka ka barakacay Muqdisho iyo kula loo geystay dilka iyo dhaawaca sidii arrintooda loo soo afjari lahaa.
Sidoo kale, waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka ra'isul wasaaraha dowladda Talyaaniga oo sheegay in ay dowladda Talyaaniga taageersan tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya balse loo baahan yahay in wadahadal lagu dhameeyo xaaladda ka aloosan Soomaaliya asagoo warkiisa ku daray in loo baahan yahay in kulan lagu qabto meel munaasib ah oo la'isugu keeno mucaaradka iyo muxaafadka loona dhammaado kulankaasi.
Dhanka kale, ra'isul wasaare Cali Maxamed Geeddi ayaa qiray in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku ammartay in xaafadaha qaardood laga qaxo ama laga baxo.
Ra'isul wasaare Geeddi ayaa sheegay in arrintan loo sameeyay si loola dagaalo dad uu ku tilmaanay in ay argagixiso yihiin ama xiriir la leeyihiin.
Dadka ka bara kacay Muqdisho ayaa waxaa dhibaato weyn ku haystaan goobihii ay u qaxeen ayadoo ay la soo deristay geeri, bushi iyo cunno iyo biyo la'aan.